डरलाग्दो २०१ CM सामाजिक दृश्यको लागि सीएमओ गाइड Martech Zone
बुधबार, जुलाई 30, 2014 बुधबार, जुलाई 30, 2014 Douglas Karr
हिजो, मैले यो पोष्ट पूरा गरेको थिएँ र प्रकाशितमा क्लिक गर्न मात्र लागेको थिएँ जब मैले मेरो ल्यापटपमा बियर ढकढकाएँ। मलाई आशा छ यो कर्मा मेरो बट लाई लात लिन आउँदैन। ल्यापटप बचाईयो, तर केहि ब्लाग पोष्ट हराए। म बियरको बेहोश गन्धको साथ यस पृष्ठलाई पृष्ठभूमिमा लेख्दैछु मेरो स्नाकर्नेसलाई तल राख्न मलाई सम्झना गराउन।
यहाँ कुरा हो, मलाई लाग्छ कि यो डरलाग्दो इन्फोग्राफिक हो। भिजुअल रूपमा, यसमा जे भए पनि समग्र कथाको केहि भन्नुको अभाव छ। यो केवल लेखहरू र रिपोर्टहरूबाट संकलन गरिएको विचारहरूको स collection्ग्रह हो जुन - म विश्वास गर्दछु - निगमको दृष्टिकोणमा भयानक अव्यवस्था देखा पर्नेछ कि यसको व्यवसाय अनलाइन बनाउने र निर्माणको लागि एक ठूलो सामाजिक मिडिया रणनीति लागू गर्न। यो B2B, B2C, व्यवसायको आकार र उद्योग क्षेत्रको लागि विभाजित छैन। उह।
पहिलो र प्रमुख, को कुनै उल्लेख को अभाव सामाजिक को मानवीय पक्ष मलाई तर्साउँछ। ब्रान्ड जागरूकता मानव अन्तरक्रिया जस्तै छैन। लोगो हेर्नु भनेको ब्रान्ड सचेतना हो। अख्तियार र विश्वास अनलाइन बटुल्दै, अधिक आगंतुकहरूलाई रूपान्तरण गर्न गाडी चलाउनु भनेको एक मानवीय अन्तरक्रिया हो जुन भावनात्मक संलग्नता आवश्यक पर्दछ। म मान्दिन कि ब्राण्ड जागरूकता सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको प्रयोगको प्राथमिक पक्ष हो, म विश्वास गर्दछु व्यक्तिगत प्रतिष्ठा निर्माण गर्नु हो। मानिस मानिसहरुलाई विश्वास गर्छन् ... र ती मध्ये केहि मानिसहरु ब्रान्डका लागि काम गर्छन्। मसँग संवाद छैन र ब्रान्डको अनलाइन विचारहरू पढ्ने छैन, म कुरा गर्छु, साझेदारी गर्छु र मान्छेबाट खरीद गर्दछु।
मलाई ट्राफिकको वास्ता छैन। ट्राफिकले खास फरक पार्दैन जबसम्म यातायातले व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्दैन। व्यवहार र रूपान्तरण यातायात भन्दा बढी कुरा। म विज्ञापन किन्न जान्छु जुन हजारौं दृश्यलाई वेबसाइटमा ड्राइभ गर्न सकिन्छ, यातायात सान्दर्भिक, रुचि नभएको र रूपान्तरणको लागि मार्ग नदेखीकन यसले फरक पार्दैन। लिंक्डइन "ठीक छ" तर फेसबुक राम्रो छ? कस्को लागि?
सामाजिक मिडिया परिदृश्य हो प्लेटफर्मको बारेमा होईन, यो उनीहरूको राम्रो कामको बारेमा हो र व्यवसायलाई तिनीहरूको सम्भाव्यता र ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्न मद्दत गर्न राम्रो गर्दैन। प्लेटफर्मको सट्टामा, यसले कुन सामग्री साझेदारी गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, कसरी तपाईं यसलाई साझा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, र ग्राहक वा सम्भावनाले यससँग के गर्न सक्दछ कुरा गर्न सक्दछ। के तिनीहरूले यसको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छन्? के तिनीहरूले अधिक सान्दर्भिक दर्शकहरूको लागि तपाईंको सन्देश विस्तार गर्न सक्दछन्? के तिनीहरूले यसलाई किन्न सक्छन्? प्लेटफर्महरू आउँछन् र जान्छन्, तर सामाजिक व्यवहार कुञ्जी हो।
ग्राहक संचारले फरक पार्दैन, ग्राहक बुद्धिमत्ता गर्छ तपाईको ब्रान्डको अनलाइन भावना के हो? तपाइँको प्रतिस्पर्धाको तुलनामा तपाइँ कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ? तपाईंको उद्योगमा खाँचो भएका व्यक्तिहरू के हुन्? के तपाई आफ्नो प्रतिष्ठा राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ एक सामाजिक सेटिंग मा तपाइँको ग्राहक सेवा सेवाहरु सार्वजनिक रुपमा साझा गरीएको छ? तपाईं डाटा र बुद्धिको अविरल भोल्युमसँग के गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको सम्भावनाहरू र ग्राहकहरूको बारेमा छ?
कुनै छलफल छैन मोबाइल (इन्स्टाग्रामको अनुप्रयोग बाहिर), स्थानिय, र सामाजिक विज्ञापन? सबैभन्दा बढि विकास, बज र परिणामहरू उत्पन्न गर्ने सामाजिक मिडियाका तीन पक्षहरू? कसरी बारेमा प्रत्येक प्लेटफर्म उपकरणहरु मा लाभ लिन सकिन्छ र यति प्रभावकारी लक्षित? म विश्वास गर्न सक्दिन कि यसमा कुनै जानकारी छैन जब तपाईं सोशल मिडियाको परिदृश्यमा कुरा गर्नुहुन्छ।
मँ SEO मा टेबुल बनाएको कसरी पस्न चाहन्न। यदि तपाइँ एक महान इन्फोग्राफिक जाँच गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाइँको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्रयासलाई मद्दत गर्न सक्छ, जाँच गर्नुहोस् सामाजिक मिडिया नेभिगेट गर्नका लागि एक क्षेत्र गाईड, कसरी व्यवसायहरू सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दै, सामाजिक स्थानीय मोबाइल र सामाजिक मिडिया को। 36 नियम केहि उपयोगी जानकारी को लागी।
म साँच्चिकै माया गर्छु CMO.com - मँ प्रत्येक दिन त्यहाँ केहि अद्भुत जानकारी र सल्लाह पढ्दै छु, तर यो इन्फोग्राफिकले औसत बजारलाई सामाजिक मिडियालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नको लागि मार्क पूर्ण रूपमा हराउँछ। केवल फोटोशपमा एउटा टेबल थप्पड नगर्नुहोस् र यसलाई एक इन्फोग्राफिक कल गर्नुहोस्। प्राप्त एक पेशेवर इन्फोग्राफिक डिजाइन र एउटा कथा दिनुहोस् जुन मार्केटरहरूले बुझ्न, भस्म गर्न, विश्वास गर्न र साझेदारी गर्न सक्दछन्!
तपाईं यो इन्फोग्राफिक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग असहमत हुनुहुन्छ। म जान्न चाहान्छु, यद्यपि तपाईले यस इन्फोग्राफिकबाट कस्तो कार्यवाही गर्ने सल्लाह जम्मा गर्नुभयो र तपाईले त्यसलाई कसरी आफ्नो व्यवसायको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ।
टैग: २०१ social सामाजिक परिदृश्यखराब इन्फोग्राफिकब्रान्ड जागरूकताकसरीग्राहक संचारफेसबुकGoogle +इंफोग्राफ़कइन्फोग्राफिक डिजाइनइन्स्टाग्रामLinkedInPinterestगरीब इन्फोग्राफिकएसईओस्लाइड शोट्राफिक उत्पादनtwitterYouTube